Kedu ihe dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa na ọkara dị oké ọnụ ahịa? Ego ma ọ bụ ọnụ?
Ọrụ nnwale okwute dị n'ịntanetị
Ihe dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa na ọkara
Dika ihe omimi sayensi si di, enwere okpukpu abuo maka ihe bara uru: nkume di oke na nkume di oke mma.
Enwere naanị 4 nkume dị oké ọnụ ahịa
Nkume 4 dị oké ọnụ ahịa bụ diamond, ruby, sapphire, emerald.
Banyere ezinụlọ 70 na ụdị 500 dị iche iche
Ụdị betwin dị iche iche na nkume ndị ọzọ bụ eziokwu na a na-eji ha eme ọla ma ọ bụ na nkume ndị ọzọ abụghị.
N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị kweere, ọ bụ nanị otu ihe kpatara nkume dị iche iche dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa bụ akụkọ ihe mere eme. N'ezie, banyere 500 afọ gara aga, ike nke ụwa a nwere mmasị nanị na nkume anọ ndị a. N'oge ahụ, nkume ndị ọzọ abaghị uru. Ya mere, anyi nwere ike iche na obu nkume di iche iche, n'oge ahu, ha nogide, rue taa, nkume ndi kachasi ike.
Ọ na-anọchi anya akara nke akụnụba na ike. Ma ọ bụ n'ihi ihe ndị a ka ọ ka na-adị, n'oge ahụ, nkume kachasị ọnụ.
Ya mere enweghi nghota sayensi. Ọ bụ naanị n'ihi iwu ahịa, ma ọ bụ iwu nke ọkọnọ na ọchịchọ.
You ga-anụ maka opals “dị oke ọnụ ahịa”, tanzanites, alexandrites na ọtụtụ nkume ndị ọzọ. Nke a bụ kpam kpam ihe ọjọọ. Mana ọ bụ ebe ire ere nke ndị ahịa na-azụ ahịa na-eji adọta ndị ahịa, ma tinye uru na nkume, na-enwe olileanya ịnweta ọnụahịa ka mma.
Imirikiti ndị na-ere ahịa bara nnukwu uru abụghị gemologists ma na-echekarị na ha maara ihe ha na-ekwu maka ya, mgbe ha maara naanị ego ịzụta ha na ọnụahịa ire ahịa ha nwere olile anya inweta. Otutu n’ime ha amaghi ihe di iche na etiti okike na ya. Ọ dị ịtụnanya, ọ bụghị ya?
Ọ bụ ya mere e ji nwee ụlọ nyocha gemological nke na-egosi okwute. Nke a na - abawanye ụgwọ nke onye na - ere ere, mana ọ na - eme ka ire ahịa dị mfe.
Oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ na ọkara dị oke ọnụ
Echiche ọzọ na-ezighị ezi bụ na nkume dị oké ọnụ ahịa ndị dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ. Na eziokwu, nke a abụghị eziokwu mgbe niile. N'ezie, diamond, ruby, sapphire ma ọ bụ emerald nwere ike bụrụ ego dị oké ọnụ. Ọ dabeere na àgwà ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nnukwu àgwà ọkara nkume dị oké ọnụ ahịa nwere ike na-eri karịa ndị a obere àgwà bara nnukwu uru.
Na nchịkọta, nkume dị oké ọnụ ahịa na ọkara dị oke ọnụ pụrụ ịdị ọnụ ọnụ ma ọ bụ ọnụ ọnụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke a, na-achọ ịga site na tiori na-eme, anyị na-enye gemology ọmụmụ.
Ihe bara nnukwu uru di
Gaa leta ụlọ ahịa anyị
Home | Ebe omumu | Kpọtụrụ anyị